Google Tag Manager နှင့် Universal Analytics ကိုဘယ်လို Install လုပ်မလဲ Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 30, 2016 တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 7, 2020 Douglas Karr
ဖောက်သည်များကိုမကြာသေးမီကမှ Google Tag Manager သို့ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ tag စီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်းသင်မကြားရသေးပါကနက်ရှိုင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုရေးသားခဲ့သည်။ Tag Management ဆိုတာဘာလဲ။ - အဲဒါကိုဖတ်ဖို့သင့်ကိုငါတိုက်တွန်းချင်တယ်။
Tag ဆိုတာ Google ရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတတိယပါတီဆီပေးပို့တဲ့ကုဒ်အပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်တယ်။ Tag Manager ကဲ့သို့သော tag စီမံခန့်ခွဲမှုအဖြေကိုမသုံးပါကသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းရှိဖိုင်များကိုတိုက်ရိုက်ဤအချက်အလက်အတိုအထွာများကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ Google Tag Manager ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Tag စီမံခန့်ခွဲမှု၏ကောင်းကျိုးများအပြင်၊ Google Analytics ကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများအတွက်မူရင်းအထောက်အပံ့အချို့ရှိပြီးသင်အားသာချက်ယူချင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာများအပေါ်အနည်းငယ်သာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအကြား GTM ကို configure လုပ်သည်။ ဂူဂဲလ် Tag Manager နှင့် Universal Analytics ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ် Analytics ၏အကြောင်းအရာအုပ်စုများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သူများ၏ဆိုဒ်များတွင်အဓိကကုဒ်ကိုတည်းဖြတ်စရာမလိုပဲထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပြင်ဆင်နိုင်သည်။ နှစ်ခုကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအလုပ်လုပ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုသင့်အတွက်မှတ်တမ်းတင်လိုပါသည်။
configure လုပ်ဖို့နောက်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးမယ် အကြောင်းအရာအုပ်စုဖွဲ့ Google Tag Manager နဲ့သုံးပေမယ့်ဒီနေ့ဆောင်းပါးအတွက်ရည်မှန်းချက် ၃ ခုရှိတယ်။
Google Tag Manager ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ သင်၏ဆိုဒ်ပေါ်တွင် (WordPress အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ထည့်ပြီး) ။
Google Tag Manager ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်သင်၏အေဂျင်စီမှအသုံးပြုသူတစ် ဦး မည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။
Google Tag Manager တွင် Google Universal Analytics ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ.
ဤဆောင်းပါးသည်သင်အတွက်သာရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အမှန်တကယ်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်လည်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းတို့အတွက် GTM ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုပြီးအပြင်ပြင်ပ script များမည်သို့တင်ပို့သည်သာမက၎င်းတို့၏ Google Analytics ၏အစီရင်ခံမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Google Tag Manager ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲ
သင်၏ဂူဂဲလ် Analytics ၏လော့ဂ်အင်ကိုအသုံးချခြင်းအားဖြင့်သင်မြင်ပါလိမ့်မည် Google က Tag ကို Manager က ယခုအဓိက menu တွင် option တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း:
သင်ယခင်က Google Tag Manager ကိုတစ်ခါမျှမတပ်ဆင်ထားပါကသင်၏ပထမ ဦး ဆုံးအကောင့်နှင့်ကွန်တိန်နာကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်သင့်အားလမ်းလျှောက်ရန်ကောင်းသော wizard ရှိသည်။ ငါအသုံးပြုနေသောစကားစုကိုသင်နားမလည်ပါကသင့်အားလမ်းလျှောက်နေသောဤပို့စ်တွင်ပါသောဗီဒီယိုကိုသေချာကြည့်ပါ။
ပထမ ဦး စွာသင့်အကောင့်အမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့သင်ဟာ Google Tag Manager ကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်ထားနိုင်တဲ့ဆိုဒ်များနှင့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုစီကိုရှာပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင်သင့်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ဌာနခွဲအပြီးနာမည်ပေးမည်။
သင်၏ account ကို setup ပြုလုပ်ပြီးပါကသင်၏ပထမဆုံး setup လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ထည့်သောအရာ.
သင်ကလစ်နှိပ်ပါတဲ့အခါ ဖန်တီး၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတူရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင်သဘောတူသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ဆိုဒ်ထဲသို့ထည့်ရန် scripts နှစ်ခုပေးပါလိမ့်မည်။
ဤ script tag များကိုမည်သည့်နေရာ၌ထည့်သည်ကိုဂရုပြုပါ၊ နောင်တွင်သင် Google Tag Manager အတွင်း၌သင်စီမံခန့်ခွဲမည့်မည်သည့် tag များ၏အပြုအမူအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
WordPress ကိုအသုံးပြုပါသလား။ ငါအရမ်းအကြံပြုလိုပါတယ် Duracelltomi Google Tag Manager WordPress Plugin ကို။ Content အုပ်စုများကို Google Analytics တွင် configure လုပ်သောအခါ၊ ဤ plugin သည်သင့်အား ၀ မ်းနည်းမှုများစွာကိုသက်သာစေမည့် built-in ရွေးချယ်စရာများနှင့်ပါ ၀ င်သည်။
သင်သည် GTM ကို third-party plugin တစ်ခုသို့မဟုတ်ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းကို configure လုပ်ထားလျှင်သင့်အားပုံမှန်အားဖြင့်သင်သာတောင်းဆိုသည် ကွန်တိန်နာ ID။ ငါရှေ့ဆက်သွား။ အထက်မျက်နှာပြင်တွင်ဝိုင်းပါတယ်။ ၎င်းကိုရေးမှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်မေ့ခြင်းအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့၊ GTM ကသင့်ရဲ့ GTM အကောင့်မှာလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
သင်၏ script များသို့မဟုတ်ပလပ်အင်များတင်သလား။ Awesome! Google Tag Manager ကိုသင်၏ဆိုဒ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။
သင်၏အေဂျင်စီအား Google Tag Manager သို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ပုံ
အထက်ပါညွှန်ကြားချက်များသည်အလွန်ခက်ခဲလွန်းပါကသင်၏အေဂျင်စီအားတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုသင်တိုက်ရိုက်သွားနိုင်သည်။ wizard ကိုပိတ်ပြီးစာမျက်နှာရှိအလယ်တန်းမီနူးမှအက်ဒင်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်နှိပ်ပါလိမ့်မယ် အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှု သင်၏အေဂျင်စီကိုထည့်ပါ
[box type =” warning” align =” aligncenter” class =”” width =” 80%”] ဤအသုံးပြုသူနှင့်ကျွန်ုပ်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်ပေးနေကြောင်းသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ သင်၏အေဂျင်စီအားဝင်ရောက်ခွင့်ကိုသင်ကွဲပြားစွာဆက်ဆံချင်ပေမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ သင်သည်သင်၏အေဂျင်စီကိုအသုံးပြုသူအဖြစ်ထည့်သွင်းပြီး၎င်းတို့ကိုထုတ်ဝေနိုင်သော်လည်းဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပေးလိမ့်မည်။ Publishing tag ၏အပြောင်းအလဲများကိုသင်ထိန်းချုပ်ချင်လိမ့်မည်။ [/ box]
ယခုသင်၏အေဂျင်စီသည်သင်၏ဆိုက်ကို၎င်းတို့၏ Google Tag Manager အကောင့်ထဲဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏သုံးစွဲသူဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုသူတို့အားပေးပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။
Google Tag Manager တွင် Google Universal Analytics ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ
ဒီနေရာမှာ GTM ကိုသင့် site ပေါ်တွင်စနစ်တကျထည့်သွင်းထားသော်လည်းသင်ပထမဆုံး tag ကိုမထုတ်မချင်းဒီဟာကဘာမှမလုပ်ဘူး။ ငါတို့ပထမဆုံး tag ကိုလုပ်မယ် Universal Analytics မှ။ ကလစ်နှိပ်ပါ New Tag ထည့်ပါ Workspace တွင်:
tag အပိုင်းကိုနှိပ်ပါ။ သင်ရွေးချယ်လိုသော tags များပါလိမ့်မည် Universal Analytics မှ:
သင်၏ UA-XXXXX-X ကုဒ်ကိုသင်၏ဆိုဒ်ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သောသင်၏ Google Analytics script မှရယူရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းကိုမှန်ကန်သောအပိုင်း၌ထည့်ပါ။ သိမ်းဆည်းရန်မရွေးရသေးပါ။ သငျသညျထို tag ကိုပစ်ချင်တဲ့အခါငါတို့ GTM ကိုပြောပြရန်ရှိသည်!
နောက်ပြီးတစ်ယောက်ယောက်ကသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာစာမျက်နှာတစ်ခုကိုကြည့်တဲ့အခါတိုင်း tag ကိုပစ်ခတ်ချင်တယ်။
ယခုသင် tag ၏ချိန်ညှိချက်များကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
သိမ်းဆည်းရန် (Save) ကိုနှိပ်ပါ။ မှတ်သားထားရမည့်အချက်မှာ tag သည်သင်၏ဆိုဒ်သို့မထုတ်ဝေသေးကြောင်း - ၎င်းသည် GTM ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သင်သည်ပြောင်းလဲမှုတန်ချိန်များစွာ ပြုလုပ်၍ ပြောင်းလဲမှုများကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီပြင်ဆင်မှုတိုင်းကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ tag ကိုစနစ်တကျစီစဉ်ပြီးပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။ Publish ကိုနှိပ်ပါ။ သင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်သင်ဘာလုပ်သည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ သင့်ဆိုဒ်တွင်အုပ်ချုပ်သူနှင့်အေဂျင်စီမိတ်ဖက်များစွာရှိပါက၎င်းသည်အလွန်အထောက်အကူပြုသည်။
[box type =” သတိပေးချက်” align =” aligncenter” class =”” width =” 80%”] သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှသင် tag ပြောင်းလဲမှုကိုမထုတ်ပြန်ခင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ယခင် Google Analytics script များကိုဖယ်ရှားပါ သင့် site အတွင်း! အဲလိုမဟုတ်ရင်သင်နဲ့အတူတကယ့်ကိုတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ငွေဖောင်းပွမှုနှင့်ပြandနာအချို့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် analytics သတင်းပို့သည်။ [/ box]
စန်း! သင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကိုနှိပ်ပါ။ tag ၏တည်းဖြတ်မှုအသေးစိတ်နှင့်ဗားရှင်းကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ ယခုအခါ Universal Analytics သည်သင်၏ဆိုက်တွင်လည်ပတ်နေသည်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်၊ Google Tag Manager ကိုသင်၏ site ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တင်ပြီး Universal Analytics ကို configure လုပ်ပြီးပထမဆုံး tag အဖြစ်ထုတ်ဝေသည်။
Tags: အသုံးပြုသူထည့်သွင်းမှုကိုထည့်သွင်းanalytics googlegoogle tag ပါgoogle tag မန်နေဂျာgoogle tag manager အသုံးပြုသူထည့်သည်google tag manager ကွန်တိန်နာGoogle tag ကိုမန်နေဂျာခလုတ်ဂူဂဲလ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုgtmgtm ကွန်တိန်နာဘယ်လိုgoogle tag manager ကို install လုပ်ပါနေပြည်တော်tag ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုtag မန်နေဂျာpageviews ခလုတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု
ဧပြီ 25, 2017 မှာ 2: 34 pm တွင်
မင်းက တကယ့် fart အနံ့လေးပဲ - ငါဆိုလိုတာက - စမတ်ကျတဲ့ကောင် 🙂 ဒီဆောင်းပါးက ပြီးပြည့်စုံတယ် - GTM ကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ငါလိုအပ်တဲ့အရာအတိအကျပါပဲ။ ဖန်သားပြင်ရိုက်ချက်များကို တန်ဖိုးထားပါ။
ဧပြီ 25, 2017 မှာ 2: 38 pm တွင်